Anycall Mobile — Explore Everything with Us !
အရင်လတွေကတည်းက Leaks တွေ ၊ ပုံတွေထွက်ခဲ့တဲ့ Samsung S21 Series ကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ တရား၀င်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ ဒီ S21 Series ထဲမှာဆိုရင် Galaxy S21, Galaxy S21+,…
ဒီနေ့မှာတော့ 2021 Chat Application တွေရဲ့ ထိပ်ပိုင်း App တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ Signal Application အကြောင်းကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကိုတော့…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီရက်တွေထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Location Tracking နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်တို့တတွေ ခပ်လန့်လန့်ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော်။ တချို့ကလည်း ကိစ္စက လူတွေကို လန့်အောင် ခြောက်ထားတာ တကယ်ကိုယ့်…
ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သင်လက်ရှိ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့ တည်နေရာကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ? ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့ Great Firewall အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်။ Great Firewall လို့ပြောရင် အရင်ဆုံးပြေးမြင်ကြမှာက အိမ်နီးချင်း…
Tips & Tricks February 5, 2021
လက်ရှိ ချိန်မှာတော့ Facebook သုံးဖို့အတွက် VPN ကျော်ပြီး သုံးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် VPN မကျော်ဘဲ Facebook သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် DNS ဖွင့်ပြီးသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ …
Tips & Tricks February 4, 2021
လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတော်တော်များများ Facebook သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ ဒီလို Social Application တစ်ခုသုံးလို့မရတာက သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။ သင်လက်ရှိ…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မနေ့ကလိုမျိုး ဖုန်းလိုင်းတွေ အကုန် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အရေးပေါ်သုံးလို့ရမယ့် Offline Chat App တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် App…
Tips & Tricks February 2, 2021
ဒီနေ့မှာတော့ လတ်တလောခေတ်စားနေတဲ့ Bridgefy Application လေးကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲ? ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Application လေးက Internet Connection မရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Bluetooth…
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ရိုးရှင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Feature တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ လူသိနည်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Lite Mode Feature လေးအကြောင်းကို…
Xiaomi ကတော့ လာမယ့် February 12, 2021 မှာကျင်းပမယ့် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ Mi 11 ထက်ပိုအဆင်မြင့်တဲ့ Xiaomi Mi 11 Pro…
Realme ရဲ့ Premium Mid-range series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ realme X7 Series ဟာဆိုရင်အရင်နှစ်ကတည်းကတရုတ်မှာ တော်တော်လေးနာမည်ရခဲ့တဲ့ Series လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ realme…
ရာသီဥတုက ဆောင်းနှောင်းပိုင်း ရောက်လာပြီဆိုတော့ နေပူရှိန်ကလည်း ပိုပိုတိုးလာပါတယ်။ ဒီလိုရာသီဥတုပူလာရင် ကိုယ့်ဖုန်း Battery ကလည်း အပူရှိန်ကြောင့် အားအနည်းငယ် ပိုစားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ Android…
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ S21 Ultra နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှမပြောခင် ဒီနှစ်ကတော့ Samsung ဖုန်းတွေ ရေလည်ပြောင်းလဲလာတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှတွေ့လိုက်ရတဲ့ Galaxy…
Tips & Tricks January 26, 2021
iOS 14 မှာပါလာတဲ့ Back Tap Gesture က အရမ်းကို အသုံးဝင်ပြီး အရမ်းလည်း Popular ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Feature လေးက…
Realme အနေနဲ့ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်လောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ Mid-range Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ realme7Series ကိုကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် realme…